RW Rooble oo dalka dib ugu soo laabtay | KEYDMEDIA ENGLISH
RW Rooble oo dalka dib ugu soo laabtay
Xalay xubno ka tirsan Guddiga Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka, oo uu hoggaaminayay Qaasim Cilmi Seed, oo Farmaajo ku heyb ah, oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in hoolka doorashada aysan gali doonin Xildhibaannada laga soo doortay Gedo.
MUQDISHO, Soomaaliya -Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii uu magaalada Geneva uga qeyb galay shir looga hadlayay xaaladda abaaraha ba’an ee dalka ka jira.
So gurya noqoshada Rooble, ayaa ku soo aadaysa xilli ay aloosan tahay xiisad siyaasadeed iyo mid amni, taasoo ka dhalatay damaca Farmaajo ee ah in dalka uusan bilaha soo socda u dareerin doorashada Madaxweynaha, maantana la dooran Guddoonka Golaha shacabka.
RW Rooble, ayaa hadda ku wajahan Xurunta Ciidanka Cirka, halkaas oo ay ka qabsoomeyso doorashada Guddoonka Aqalka hose, xilli ay halkaas dhawaan gaareen qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee JFS, oo uu ugu horreeyo Guddoomiye Jacfar.
Hayeeshee, Guddoomiyaha Guddigaas, Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay in shaqada Guddiga ay tahay qabashada doorashada isla-markaana aysan shaqo ku lahayn Xildhibaannada xaroonaya iyo kuwo banaanka lagu celinayo.
"Waxaan u hogaansami doonnaa, kaliya la shaqeynta liiska uu bixiyay Guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee Golaha Shacabka, Xildhibaaan Cabdisalaan Xaaji Axmed (Dhabancad)", ayuu yiri Xildhibaan/Guddoomiye Cabdirsaaq.